शनिवार, आश्विन ३, २०७७ १२:३८:३० युनिकोड
आइतवार, भदौ २८, २०७७ रौतहट अनलाइन न्युजडेस्क
हिजो आज समाजसेवाका लागि समाजमा विभिन्न किसिमका संस्थाहरु स्थापना भएको हामीले प्रशस्तै पाउने गरेका छौ । त्यसै अन्तर्गत समाजमा रहेका विपन्न,पीडित र अन्यायमा परेकाहरुको लागि केही गरौ भन्ने उदेश्यले स्थापना भएको छ , मेचीमहाकाली संयुक्त बुहारी आवज । जसले स्थापनकालको छोटो समय अवधिमै धेरै पीडितहरुलाई न्याय दिइसकेको छ भने दीन, दु:खी र विपन्न परिवारलाई राहत बाडेर केही हद सम्म भएपनि उनीहरुको दु:ख कम गर्ने प्रयास गरेको छ । मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाज बारा शाखाले आज सम्म समाजमा के कति काम गर्यो ? कसरी पीडित र दीन,दु:खीहरुका लागि सहयोग गर्यो ? यस संस्थाले आगामी दिनहरुमा कसरी काम गर्ने छ ? र पिडकहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन के गर्ने छ भन्ने बिषयमा मेचीमहाकाली संयुक्त बुहारी आवज बारा शाखाकी अध्यक्ष सावित्री बराल तिमल्सिनासँग नेपाल सन्दर्भकी पत्रकार सुस्मिता अर्यालले गरेको संवाद –
१. हजुर त व्यावसायमा लाग्नु भएको मान्छे । समाजसेवामा प्रवेश गर्ने प्रेरणा कसरी पाउनु भयो ?
समाजसेवा गर्न कुनै जात,धर्म ,पेशा केहीले पनि रोक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । समाजसेवा गर्न त आँट र हिम्मत हुन जुरुरी हुन्छ जुन मैले माइतीघरमा हुँदा मेरो दाइबाट सिके अहिले घरमा पनि उहाँ समाजसेवी नै हुनुहुन्छ । र अर्को कुरा दिन दु:खीहरुलाई सहयोग गर्न पाउँदा मनमा छुट्टै किसिमको खुसि महशुस हुन्छ । सायद त्यसैले पनि यता तिर रुचि बढ्यो ।
२. मेचीमहाकाली संयुक्त बुहारी आवाज बारा शाखाको स्थापना कहिले भएको हो ? तपाईं यस संस्थामा कसरी आवद्ध हुनु भयो ?
यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना भएको चाहिँ २०७६/५/ १९ मा हो भने बारा शाखा भर्खरै २०७७/३/२३ गते स्थापना भएको हो । यो संस्थामा कसरी जोडियौ भन्दा संस्थाको फेसबुक पेज रहेछ फेसबुक चलाउने क्रममा साथीहरुले यसमा आबद्ध हुनका लागि जोडनु भयो र जोडिए । पछि मेचीमहाकाली बुहारी संयुक्त आवाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष यमु शर्मा सुब्बाजीले अब बारामा पनि शाखा खोलेर त्याहाँका पीडितहरुलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्नू भयो र हामी यसरी जोडिएका हौ ।
३. बारा शाखाले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म के कस्ता सामाजिक कार्यहरु गरे ?
बारा शाखाले सुरुमा सुस्मिता हत्या काण्डमा आत्मा शान्तीको लागि दीप प्रज्वलन गर्यो , पथलैयामा रहेको बृद्दा आश्रममा जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा दिवा सेवा केन्द्रमा बुवा आमालाई खाद्यान्न र सम्मान कार्यक्रम गर्यो, तेस्तै निजगढ वडा नं ७ मा बस्नु हुने बुवा आमालाई खाद्यान्न सहयोग गर्यो , तेस्तै भदौ १९ गते यस सस्थाको पहिलो बार्षिक उत्सवको अवसरमा लालमा रहेको मामा घर बाल आश्रम मा २ थान फेन्टा एक काटुन फुर्टी एक काटुन चाउचाउ र बिस्कुट वितरण गर्नुका साथै लालकै वडा १० मा रहेको एकदम बिपन्न सुत्केरी महिलालाई चामल दाल तेल मरमसला घ्यूँ सुत्केरीलाई चाहिने सामान वितरण गर्यो ।
४. तपाईहरुको काम देख्दा विपन्न परिवार वा व्यक्तिलाई जिन्सी सहयोग गरेको देखियो । यो संस्थाले यस्तै राहत मात्रै दिनेकाम गर्छ कि पीडितहरुका लागि कानुनी हक अधिकारका लागि लड्न पनि सहयोग गर्छ ? यदि कानुनी रुपमा लड्न सहयोग गर्छ भने कसरी गर्छ ?
हाम्रो संस्थाले विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्नुको साथै पीडितहरुका लागि कानुनी रुपमा आफ्नो हकअधिकारको लागि लड्न पनि सहयोग गर्छ । हामीले निजगढ वडा नं १३ मा बस्ने १७ बर्षीय विवाहित महिलालाई सोही ठाउँमा मेडिकल चलाएर बस्ने डाक्टरबाट बलात्कारको प्रयास भएको अवस्थामा अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही होस् र पीडितले न्याय पाओस्, शक्तिको आडमा पैसाको चलखेल नहोस भन्दै निजगढ इलाका प्रशासन प्रमुख विकास थपलियालाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो । न्यायको लागि लडियो। यसरी पीडितहरुलाई कानुनी रुपमा पनि हाम्रो संस्थाले आश्रय दिदै आइरहेको छ र पछि पनि दिने छ ।
५. तपाईंहरुले यसरी समाजसेवा गरिरहदा आवश्यक पर्ने खर्च कसरी जुटाउने गर्नु भएको छ ? संस्थाको आय स्रोत के हो ?
यस संस्थाको लागि हामी समितिका साथीहरु र संस्थामा आबद्ध साथीहरु बाट पैसा उठाउँछौ । हाम्रो आयस्रोत भनेको समितिको सदस्यता शुल्क र हामीहरुले उठाएर आएको रकम नै हो ।
६. यसरी पैसा उठाएर अथवा सदस्यता शुल्कबापत उठेको पैसाले सधैं संस्था चलाउन पक्कै पनि नसकिएल अथवा गार्‍हो पर्ला । संस्थाको आयस्रोत कसरी बढाउने भन्ने बारे के सोच्नु भएको छ ?
पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ तर हामीले अब आउने दिनहरुमा नगरपालिका, वडा र प्रदेश बाट बजेट माग गरेर चलाउने सोचेका छौ ।
७. स्थापनाकालको यति छोटो समयमै यति राम्रा र यति धेरै समाजिक कामहरु गर्नु भएको रहेछ । यसरी अघि बढिरहदाँ कत्तिको समस्याहरु झेल्नु पर्यो ? त्यसलाई कसरी समाधान गर्नु भयो ?
अघि बढ्नेको खुट्टा तान्नेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । तर खुट्टा ताने भन्दैमा हामीले आफ्नो लक्ष्य बिर्सेर पछाडि हट्नु हुदैन । जुन कुनै पनि काममा समस्याहरु आइनै हाल्छन तर ती समस्याहरुलाई समाधान गरेर हिड्न सक्ने साहस चाहिन्छ । समाजका लागि केही गर्छु भनेर हिडेपछि डराउनु हुदैन र त्यो गुण हाम्रो समितिको सबै सदस्यहरुमा छ । आएका समस्याहरु कस्ता प्रकृतिका हुन् हेरेर सामान्य भए यसै छाड्दिन्छौ र एक्सन लिनु पर्ने खाल्का भए तेहि अनुसार जाने गरेका छौ ।
८. मेचीमहाकाली संयुक्त बुहारी आवाज बारा शाखाको अबको भाबी योजना के-के छन् ?
अनाथलय ,बालआश्रममा रहेका बालबालिका र बृद्धाआश्रममा रहेका बुवा आमाहरुलाई सहयोग गर्ने, पीडित तथा हिंसामा परेकहरुको न्यायका लागि आवाज उठाइ रहने हाम्रो भावि योजना हो ।
९. अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
अन्त्यमा समाज सेवा जस्तो कामगर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । यस्तो काम हामी एक दुई संस्थाहरुले मात्र गरेर पूर्ण रुपमा सफल हुन गार्‍हो छ । सबैले हाते मालो गर्यौ भने अवस्य सफल हुन्छौ र पीडितको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्छौ । तेसैले हजुरहरु सबैकाे साथ सहयोगको खाँचो छ हामीलाई । तपाईं सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छ छौ र हाम्रो संस्थाको बिषयमा सबै सामु यसरी कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा नेपाल सन्दर्भ तथा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, भदौ २८, २०७७, ०८:५९:००